POKY POSKY Boeing 777-200 Pack FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 187 185
Nosedraina OK niaraka FSX-SP2 + FSX-SE + P3D v1. * v2 v3 mba hizahana OK
Mpanoratra: Open Project Sky
Nohavaozina tamin'ny 18 / 01 / 2013 fifanarahana miaraka amin'ny P3D : Ity ny Boeing 777-200 (tetikasa Open Sky) modely 3D ahitana kalitao tsy fahita firy! Ity kitapo ity dia feno ary ahitana ny Cocknit virtualizo 3D miaraka amin'ny 2D panel + gauges maoderina, mozika an-tariby mifototra amin'ny baolina kitra sy ny maro hafa tsy ampoizina. Package natonta sy notsapaina tamin'ny rikoooo FSX-SP2 /P3D. Ny Credits dia an'i POSKY.
Ny hakanton'ny virtoaly dia hatsaran-tarehy miavaka, ny modely ivelany dia tena azo antoka ary tena matihanina. Ary toy ny hoe tsy ampy izany, dia nanampy soratra 4 aho: Air France, Emirates, American Airlines ary British Airways miaraka amin'ny modely roa sy karazany roa: Rolls-Royce Trent ho an'ny Emirates sy American Airlines, General Electric ary Air France British Airways. Io add-on io dia mitovy amin'ny iray amin'ny Air Fleet Air France ho an'ny FS2004 fa miara-miasa amin'ny FSX plus updates ary feo sy texture fanampiny.
Raha ny gauges rehetra mainty, mampiasa Gauges Recovery mba hamahana ny olana: Jereo ny safidy "System Files": kitiho eto